Arabia Saodita:Tezitra noho ny fisamborana an’i Al Farhan ireo bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2019 3:42 GMT
Rasheed Abou-Alsamh, bilaogera sady mpanao gazety Saodiana-Amerikana, izay monina ao Jeddah, manombatombana momba ny antony mety nanagadràna an'i Al Farhan ary mitaky fanavaozana bebe kokoa ao amin'ny Fanjakana. Nanazava izy hoe:
Niseho ny fisamborana farany rehefa avy nitsidika ny iray tamin'ireo reformista Saodiana sivy voasambotra tamin'ny 10 febroary 2007 izy ary mbola voatazona any amin'ny fonja miafin'ny polisy any avaratr'i Jeddah rehefa tsy nety nanasonia fifanarahana fa hampitsahatra ny fitakiana fanavaozana ara-politika izy ireo. Nanoratra momba ny fitsidihany tao amin'ny bilaoginy i Fuad.
Manantena koa ny namana bilaogera Saudi Jeans fa ho avotsotra tsy ho ela i Al Farhan. Hoy izy nanamarika:
Avy ao Bahrain, Mahmood Al Yousif milaza amin'i Al Farhan fa tsy irery izy, manome antoka azy fa be mpanohana izy. Hoy izy nanoratra:
Bilaogera Ejiptiana maro koa no nitaky ny famotsorana an'i Al Farhan. Anisan'izany ilay bilaogera Bella, izay mitaraina momba ny toerana misy ny Arabo, izay maneho ny heviny. Manoratra izy:
Misy bilaogy iray ihany koa ato napetrak'ireo mpikatroka manohana azy.